Muqdisho Maxay Qaraxyadu U ga Joogsan Laa yihiin?!! - Latest News Updates
Muqdisho Maxay Qaraxyadu U ga Joogsan Laa yihiin?!!
Intii aan Xamar joogay ayaan habeen is raacay nin ciidan ah oo aan hore saaxiib u ahayn.”Xaggee ku geeyaa ayuu i gu yidhi oo aanad arag”?
Aar magaalada laba usbuuc ayaan joogo meelo badan waa arkee; meel uun i gee ayaan ku idhi. Inuu i soo tusaayo meeshii la dhihi jirey Ex-Kaantarool-Afgooye ayuu ii sheegay. Waan ka aqbalay anna. Waxa aan soconnay muddo waddada oo jaam ahayd awgeed. Nabadqab ayaan ku gaadhney Ex-kaantarool Afgooye. Waa dhulbannaan oo loogu talogalay baabuurta u baxaysa Afgooye iney u noqoto Istaan iyo goob nasiino.
Markii aan ka bogtay meeshaas ayaan waddo kor u baxda oo Jidka Warshadaha la yidhaah sii marnay. Waa waddo madaw oo bilaa laydh ah. Waan cabsaday runtii anigu. Wuxuu isna ii sheegay in halkan Al-shabaab iyo dawladuba joogaan. Waan sii cabsaday! Wuxuu haddana ii sheegay in haddii cid soo weerarto uu sito baskoolad ay ku jiraan laba iyo toban xabbo oo aan isku difaaci karno muddo la noogu soo gurman karo. Ha baqin ayuu i gu yidhi mar labaad. Qalbiga ayaan adkaystay anna. Waxaan soconnoba boodh weyn oo ay ku qoran tahay degmada ‘Dayniile’ ayaan ka hoos laabnnay. Askar ayaa hor taagnayd waddada dhinaceeda. Laydhka hore ayaan bakhtiiney ka gudahana waan shidnay. Cabbaar ayay na jeekimeen; waana iska dhaafnay. Markaan xoogaa soconnay ayaa haddana qolo kale na istaajisey. Intii in leeg ayaan samaynay. Se kuwani waxay noogu sii dareen su’aal ah;”wax hub ah maad sidataan”? Waan yaabay anigu. Kabtankii aan la socday ayaa hadlay oo ku yidhi; haa waan sitaa. Tus ayuu ku yidhi. Isna wuu tusey.”Keen sharcigeedii ayuu ku yidhi haddana.”? Intaa anigu waan daawanayaa waxa meesha ka socda. Askariga aan la socdaa waa bilaa dirays oo maryo caadi ah ayuu sitaa.”Sow Xamar qof weliba wuxuu wataa ID-Card-yar”? Wuxuu la soo baxay ID-gii- ciidannimadiisa. Waa tusey. Mise waa kabtan ay ku xardhan yihiin saddex xiddigood. Markiiba inaan hore u soconno ayaa la na amray.
Markii sidaas aan u dhaafnay; ayuu saaxiibkay gaadhigii si xawli ah u kaxeeyay. Kolba waddo ayuu ku laabta, haddana waddo kale ayuu u celiyaa gaadhiga.”Maxaa dhacay ayaan weydiiyey; sow nagii markii hore aayar iska soconnay saaxiib”?
Wuxuu si yar oo fudud i gu yidhi;”waxaan ka baxsanaynaa ninkii bileyska ahaa ee hadda na soo jeekimey; waayo, waxaa laga yaabaa; inuu hoosta u gu shaqeeyo Al-shabaab oo uu intuu teleefoon ku hadlo yidhaahdo; “waddadaas iyo waddadaas waxaa soo maraaya nin kabtan ah ee jid’gooyo u sameeya”!
Markii ba su’aalo badan ayay isweydiisey maskaxdaydu. Inaan halis ka badbaaday ayaan nafta u sheegay. Isna waan u ga mahadceliyey inuu sidaa ii la shaqeeyay. Alla fuleysaniyaa!!
Dhibka Muqdisho ka jirtaa waa taas. Waa fikirkii oo bulshada dhexgalay. Waa fikirkii oo haayadaha dawladda ku milmey. Iska dhaaf madaxda dalkoo, xataa kii nabadda loo direy inuu sugo ayaan caafimaad qabin oo aan laysku hallayn karin! Sidaas inta ay Xamar tahayna, nabadda iyo nololsha ay kooxda Farmaajo meelahaas ka sheegaan ka dheer. Waa halkii wasiir Beyle e, “Soomaaliya waa mashruuc”!
Intii ku dhimatay qaraxii maanta Alle haw naxariisto, intii ku dhaawacatayna Alle caafimaad degdeg ah ha siiyo.😭